အမျိုးအစား: ဓာတုအရန်ကိုယ်စားလှယ် Agent CAS No. : 112945-52-5 အခြားအမည်များ: Silicon Dioxide MF: SiO2 EINECS No.:215-684-8 မူလနေရာ၊ Zhejiang၊ တရုတ်အဆင့်အတန်း၊ စက်မှုအဆင့်သန့်ရှင်းမှု: ၉၉.၈% အသွင်အပြင်: အဖြူ Nano-Scaled Powder အပလီကေးရှင်း: ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှင်; အပေါ်ယံပိုင်း; Sealants များ၊ ရာဘာ၊ ပုံနှိပ် & မှင်; အပေါ်ယံပိုင်း; Sealants များ၊ ရာဘာအမှတ်တံဆိပ်အမည်: FST မော်ဒယ်နံပါတ်: FST-150 သတ်မှတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ (BET): 150 ± 25 pH ၌ 4% ပျံ့နှံ့မှု: 4.0-4.5 အခြောက်ခံခြင်း (105 at တွင်2နာရီ) ဆုံးရှုံးခြင်း: ≤2.0% လောင်ကျွမ်းခြင်း
နိဒါန်း FST fumed silica သည်ပိုးသတ်ဆေးရည်ဖော်စပ်မှုအတွက် rheology ပြုပြင်မွမ်းမံသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အရည်ပိုးသတ်ဆေးဖော်မြူလာများတွင်မပျော်ဝင်နိုင်သောတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ဖြေရှင်းချက်သက်ရောက်မှုများနှင့်ထိရောက်မှုကိုလျော့ကျစေသည်။ အရည်များဖော်စပ်ရာတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတည်ငြိမ်စေခြင်းနှင့် fumed silica link သုံးဖက်မြင်ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် viscosity ကိုထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် ဂုဏ်သတ္တိများ * elastomers များတွင်အားဖြည့်ဆေးများ * Anti-settling, anti-sagging and thickening agent * Rheology control and thixotropic agent * Free fl ...
Cabosil Eh5 Fumed Silica ကိုအစားထိုးပြီး Fumed Silica 380
လက္ခဏာများ FST-380 သည် ၃၈၀ m2/g ပတ်လည်မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းရှိ hydrophilic fumed silica ဖြစ်သည်။ elastomers များ၌ဖြည့်စွက်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ Anti-settling, thickening နှင့် anti-sagging agent Rheology နှင့် thixotropy ထိန်းချုပ်မှုအရည်စနစ်များအတွက် Free flow aid နှင့်အမှုန့်အတွက်ဆန့်ကျင်ဖက်အကူအကူအညီများ Coatings & Paintings Silicone ရာဘာများနှင့်အခြား elastomers UPR Adhesives များ Sealants ပုံနှိပ်မှင်ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာလက်မှတ်ထုပ်ပိုး
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Fumed Silica Comparative Table FST Wacker Cabot Evonik TOKUYAMA OCI FST-150 V15/V15A LM-150/LM-150D Aerosil 150 QS10 K-150 FST-200 N20 M-5/M-7D Aerosil 200 QS102/QS20 K-200 FST-300 T30 H-5 Aerosil 300 QS30 K-300 FST-380 T40 EH-5 Aerosil 380 QS40 K-380 FST-430 T40 EH-5 Aerosil 380 QS40 K-380 ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်ခြယ်ခြင်းများတွင်သုံးသည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်နှင့် Leveling Performance ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ Adhesives & Sealan တွင် ...
ဝိသေသလက္ခဏာများ FST၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ခတ်ထားသောဆီလီကာအမှတ်တံဆိပ်သည်အမွှေးနု၊ အဖြူရောင်နှင့် amorphous အမှုန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ sub-micron အမှုန်အရွယ်အစား၊ လုံးဝန်းပုံသဏ္န်၊ မြင့်မားသောတိကျသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်ထူးခြားသောမျက်နှာပြင်ဓာတုဗေဒတို့ဖြင့်လည်းသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများကို FST ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအမျိုးမျိုးတွင်သုံးခွင့်ပြုသည်။ အမှုန်အမွှားတစ်ခုစီသည်အချင်း ၇ မှ ၄၀ nm အရွယ်အစားရှိပြီး BET နှင့်သီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာတွင် ၁၀၀ မှ ၄၀၀ m2/g အထိကွဲပြားသည်။ fumed silica ၏အမှုန်အရွယ်အစားကို ma ကပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Sealants and Adhesives အတွက် Fumed Silica FST-200
FST မှေးထားသောဆီလီကာသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်လျှံတွင် Silicon Tetrachl ၏အငွေ့အဆင့် hydrolysis ဖြင့်ထုတ်လုပ်သော amorphous fumed silica ဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SiO2) FST fumed silica သည်သန့်ရှင်းသော amorphous pyrogenic silica ဖြစ်ပြီးအဆိပ်မရှိ၊ မီးမလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါ။ ၎င်း၏မူလအမှုန်အရွယ်အစားသည် ၇-၄၀ nm အကြားရှိသည်၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအားဖြည့်ခြင်း၊ ထူခြင်း၊ thixotropic၊ matting၊ UV ပိုးသတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
Fumed Silica FST- 380- အရည်စီလီကွန်ရော်ဘာ LSR အတွက် Pyrogenic Silica
လက္ခဏာများ FST-380 သည် ၃၈၀ m2/g ပတ်လည်မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းရှိ hydrophilic fumed silica ဖြစ်သည်။ နည်းပညာ Parameter Applications များ Coatings & Paintings Silicone rubber and Other elastomers Film & UPR Adhesives & Sealants Printing ink Properties * elastomers တွင် filler ကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း * Anti-settling, anti-sagging and thickening agent * Rheology control and thixotropic agent * Free flow aid and anti-caking အမှုန့်များအတွက်အကူအညီ အဖြူရောင် kra ...
Gel ဘက်ထရီအတွက် Fumed Silica FST- 200
ဝိသေသလက္ခဏာများ FST သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်လျှံတွင် Silicon Tetrachl ၏အငွေ့အဆင့် hydrolysis ဖြင့်ထုတ်လုပ်သော amorphous fumed silica ဖြစ်ပြီးရလဒ်များသည်သန့်စင်သည်။ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SiO2) FST သည်သန့်ရှင်းသော amorphous pyrogenic silica ဖြစ်ပြီးအဆိပ်မရှိ၊ မီးမလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါ။ ၎င်း၏မူလအမှုန်အရွယ်အစားသည် ၇-၄၀ nm အကြားရှိသည်၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအားဖြည့်ခြင်း၊ ထူခြင်း၊ thixotropic, matting, UV ပိုးသတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချနိုင်သည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ Fumed silica သည်အလွန်ကြီးသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ အလွန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်ဓာတုကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ကွင်းဆက်များဖြစ်ပေါ်ရန်အလွန်သေးငယ်သောအမှုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှုန်များကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်လေထဲသို့လျှံကာ silicon tetrachloride ကဲ့သို့ chlorosilanes ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ သေချာသောတုံ့ပြန်မှုသည် fumed silica နှင့် hydrogen chloride တို့ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Fumed Silica ဓာတုဖော်မြူလာ: SiO2 ဓာတုဗေဒအမည်: Synthetic Amorphous Silicon Dioxide, crystalline- free applications များ Fumed silica ကို lam ...
Fushite မှ Fumed Silica FST- 150 သည်ကော်နှင့် sealant များအတွက်ဖြစ်သည်
ဝိသေသလက္ခဏာများ FST-150 သည် 150 m2/g ပတ်လည်မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းရှိ hydrophilic fumed silica ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် Fushite မှ fumed silica နှင့်အတူသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုများအတွက်ထိရောက်သောအရည်အသွေးမြင့်ကော်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကော်နှင့် sealant များအတွက်ဆီလီကာ၏ကောင်းကျိုးများ●တိုးတက်လာသော rheological နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ storage သိုလှောင်မှုတည်ငြိမ်မှုအတွက်မြှင့်တင်ခြင်းတည်ငြိမ်မှုအတွက် anti-sedimentation အေးဂျင့်●တိုးတက်လာသောလုပ်ငန်းစဉ်များ highly အလွန်ပွင့်လင်းသောကော်များနှင့် sealants များအတွက်သင့်တော်မှု●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးချမှု ...
FST Fumed Silica သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းအားသာချက်များကိုပံ့ပိုးပေးသော Fushite၊ ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Fushite သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အသုံးချမှုများစွာအတွက် hydrophobic နှင့် hydrophilic အဆင့်များအပြည့်အစုံကိုပေးသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံနှင့်လက်တွေ့နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုတို့ကပံ့ပိုးပေးသော FST မှုတ်ထားသောဆီလီကာသည်ပြောင်မြောက်သောအားဖြည့်မှု၊ rheology ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှုန့်များတွင် free-flow additive အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ FST Hydrophilic Fumed Silica သည်●မကုသဘဲထားပြီးရေနှင့်ပတ်သက်သောခိုင်ခံ့မှုရှိသည်။
FST မှုတ်ထားသော Silica Thixotropic အမှုန့်
ဝိသေသလက္ခဏာများသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမြင့်မားခြင်း FST fumed silica ကိုတင်းကျပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုများအောက်တွင်အလွန်သန့်စင်သောကုန်ကြမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှု: FST မှေးထားသော silica microparticles များသည်အငွေ့ထုတ်လွှတ်သောတုံ့ပြန်မှုမှတဆင့်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းစုစည်းသည်။ အတန်အသင့်ဖြန့်ခွဲခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်သောအလင်း၏လှိုင်းအလျားထက်သေးငယ်သောအမှုန်များကိုစွန့်ပစ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျသောမျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း
Hot Products များ, Sitemap Aerosil မှုတ်ထားသော Silica, Amorphous Fumed Silica, Hydrophilic Fumed Silica, Aerosil 200 Fumed Silica,